PressReader - Eyethu Baywatch: 2017-11-22 - KU­ZOBA LUKHUNI KUBALANDELI BECHIEFS
KU­ZOBA LUKHUNI KUBALANDELI BECHIEFS
Eyethu Baywatch - 2017-11-22 - NEWS • IZINDABA - _______________________ Jerry Barnes
KU­ZOBA LUKHUNI kubalandeli beKaizer Chiefs uk­wa­mukela noma ukuqhubeka ukubuka iqembu labo emva kokuphox­eka noku­phuma kuma semi fayineli eTelkom Knock Out (TKO).
Phela AmaKhosi asanda kuguqiswa kabuh­lungu omakhel­wane iBid­vest Wits eMil­park Bid­vest Sta­dium ngo 1-0 emd­lal­weni okade wan­d­ulela owa­man­qamu nobuyithemba lamaKhosi lokugcina ku­lonyaka.
Okubuh­lungu ukuthi umqe­qeshi wez­im­po­fana uSteve “Mphathi”Kom­phela uzothathwa njenge­sehluleki emva koku­joy­ina leliqembu ema­sizini am­athathu ed­lule. Ngenhlanhla-ke nan­goku­dalwa AmaKhosi iqembu elikhulu nelilan­delwa noma yi­laphi lapho lid­lala khona, nan­gan­jen­goba ne­sisho sabo sithi “IKhosi alipheli umoya”. Mh­lawumbe noku­zod­lalela eM­dubane kulem­pela­sonto ku­zosh­intsha iz­into kulethe nenhlanhla njen­goba ku­loMgqi­belo azobe etheleke eM­dubana eMoses Mab­hida Sta­dium nalapho be­zob­hekana neqembu uKom­phela aliqe­qe­sha isikhathi es­ide iFree State Stars.
Lomd­lalo uzo­qala nge­hora lesithupha (6pm), kanti omunye umd­lalo okub­hekeke ukuba uhehe iz­ihlwele eziningi uzoba eMphithi eHarry Gwala Sta­dium nalapho kuy­obe kud­lala iMar­itzburg United neBidVest Sta­dium ngo 3.30pm. Umqe­qeshi weWits uGavin Hunt uthi abad­lali bakhe ku­zo­fanele bakhohlwe ok­wen­zek­ile nge­sikhathi bed­lala iTKO neChiefs kanye nakweminye imid­lalo ba­ca­bange ngeTeam of Choice. UHunt uthi leliqembu laseMphithi liy­ohlale liyinkinga ekhaya nase­maqem­bini amaningi ikakhu­lukazi amakhulu ngoba banomqe­qeshi os­em­n­cane nokhaliphile nok­waziyo ukush­intsha abacebo okud­lala ngokushe­sha. “Angeke nje uthi uyayazi iMar­itzburg United ngoba iy­iqembu oku­lukhuni ukulidla noma yikan­jani. Umqe­qeshi wabo una­macebo amaningi futhi uyak­wazi ukush­intsha uk­wenza uma umd­lalo ulukhuni,”kusho uHunt.
Izin­sika zeWits ekub­hekeke ukuthi zinike iTeam of Choice izinkinga oThu­lani Hlatshwayo, Steven Pien­aar,Daine Klate, Dar­ren Keet (un­oz­inti), James Keene, Amr Ga­mal kanye na­banye. Kanti imid­lalo isimi yonke yeligi ih­lelwe kanje isiy­onke:
Mar­itzburg United v Wits, 15:30, Harry Gwala Sta­dium Su­perS­port United v Polokwane City, 15:30, Lu­cas Moripe Sta­dium
Chippa United v Mamelodi Sun­downs, 15:30, Nel­son Man­dela Bay Sta­dium
Kaizer Chiefs v Free State Stars, 18:00, Moses Mab­hida Sta­dium
Ajax Cape Town v AmaZulu FC, 20:15, Athlone Sta­dium
Golden Ar­rows v Cape Town City FC, 20:15, Princess Ma­gogo Sta­dium
Bloem­fontein Celtic v Or­lando Pi­rates, 15:30, Dr Molemela Sta­dium
Baroka FC v Plat­inum Stars, 15:30, Peter Mok­aba Sta­dium
Su­perS­port United v Ajax Cape Town, 19:30, Mbombela Sta­dium